सर्वोच्चको फैसला आउनु अघि प्रधानमन्त्री ओलीले किन बढाउँदै छन् सुरक्षा निकायसँगको छलफल ? « Nepal Break
सर्वोच्चको फैसला आउनु अघि प्रधानमन्त्री ओलीले किन बढाउँदै छन् सुरक्षा निकायसँगको छलफल ?
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कुनैपनि बेला संकटकालको सिफारिश गर्ने तयारी गरेका छन् ।
उनले देशमा उत्पन्न पछिल्लो घटनाक्रमलाई दृष्टिगत गरी संकटकाल लगाउने तयारी गरेका हुन् । प्रतिनिधि सभा विघटनपछि देशमा राजनीतिक अस्थिरता बढिरहँदा प्रधानमन्त्री ओलीले कडा कदम चाल्न सक्ने संकेतहरु गरिरहेका छन् ।
उनले आजै राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको बैठक डाके । आजै मन्त्रिपरिषदको बैठक पनि डाकेका छन् । सुरक्षा परिषद बैठकलगत्तै मन्त्रिपरिषद बैठक डाक्नुलाई चासोका साथ हेरिएको छ ।
प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतले आजबाट हेर्दा हेर्दैमा राखेको छ । कुनैपनि दिन फैसला आउनसक्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले फैसला आउनुपूर्व सुरक्षा निकायसँग छलफल बढाएका छन् । यसलाई संकटकाल घोषणासम्मको अग्रिम तयारीका रुपमा हेरिएको छ ।
यसै सिलसिलामा हिजो सोमबार प्रधानसेनातपति पूर्ण चन्द्र थापाले सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधिश चोलेन्द्र शम्शेर जवरासँग पनि सर्वोच्चमै पुगेर एक घण्टा छलफल गरेका थिए ।